Bruno Fernandes oo wadahadallo heshiis kordhin ah kula jira kooxdiisa Manchester United – Gool FM
Bruno Fernandes oo wadahadallo heshiis kordhin ah kula jira kooxdiisa Manchester United
Haaruun September 12, 2021
(Manchester) 12 Sebt 2021. Sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahan Bruno Fernandes ayaa wadahadallo heshiis kordhin ah kula jira Kooxdiisa Manchester United.
Jariiradda O Jogo ayaa warinaysa in Bruno Fernandes uu weli heshiis kordhin ah kula jiro kooxdiisa Manchester United, isagoo doonaya in sare loo qaado mushaharkiisa haatan uu ka qaato garoonka Old Trafford.
Xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa muddo bil ah kala hadlayey Man United in Kooxdu ay mushahar kordhin u sameyso, waxaana warbixinta lagu sheegay in United ay ogolaan doonto, isla markaana uu Bruno arki doono isagoo Old Trafford ka qaadanaya mushahar ku dhow kan haatan uu qaato Paul Pogba.
Bruno Fernandes ayaa haatan bandhig cajiib ah ku qaadanaya Kooxda Manchester United, waxaana uu u dhaliyey afar gool afartii kulan ee uu u saftay horyaalka Premier League illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Chelsea oo xalay noqotay Kooxdii labaad ee 600 oo guul gaarta horyaalka Premier League
Sidee ayay noqon doontaa SHAXDA Kooxda Barcelona ay kala hortagayso Bayern Munich ee Champions League?